Ronono: fampahalalana momba ny sakafo maha-ronono, kalitaon'ny ronono, sns.-BALLYA
Inona no mahasamihafa ny ronono iray manontolo sy ny ronono skim?
Any amin'ny firenena samy hafa, ny ronono dia samy manana ny laharany, ary ny mahazatra indrindra dia ny ronono feno tavy sy tavy ambany ary ronono. Ny ronono dia manana atiny mahavelona be ary be mineraly. Ahitana cations toy ny calcium, magnesium, potassium sy iron, ary anion toy ny cerium, selenium, ary chlorine. Ankoatr'izay, misy singa soritra toy izany […]
Mbola afaka misotro ve ny ronono?
Nanomboka tamin'ny 1 Jona tamin'ny taon-dasa, ny Minisiteran'ny Fahasalamana dia nametraka fenitra nasionaly vaovao ho an'ny indostrian'ny ronono, mampihena ny atin'ny proteinina 2.95 grama isaky ny 100 grama ka hatramin'ny 2.8 grama amin'ny fenitra voalohany; ny totalin'ny zanatany isaky ny milliliter ny ronono dia niakatra avy amin'ny 500,000 tany am-boalohany ho 2 tapitrisa. Hatramin'ny nahaterahan'ny […]
Lisitry ny marika ronono malaza eran-tany
Lisitry ny marika ronono malaza eran-tany, ireto manaraka ireto dia marika marika ronono 10 malaza eran-tany. Ireo dia avy amin'ny karazan-tany maro karazana sy ny fonosana tsirairay mamoaka totohondry lehibe eo amin'ny tsipika vokatra vita amin'ny ronono. Devondale Arla Satine Trensu Yili Mengniu Weidendorf Sanyuan Anchor Shengmu Ⅰ. DevondaleAfara natsangana tamin'ny 1950, ity orinasa aostraliana ity dia nampifantoka ny asany […]
Inona no tombony azo amin'ny fisotroan-dronono?
Famenon-tsakafo proteinina Ny maha-zava-dehibe ny proteinina, tsy ilaina intsony ny milaza fa izy dia iray amin'ireo sakafo mahavelom-bolo telo lehibe amin'ny vatan'olombelona, ​​izay singa manan-danja amin'ny vatan'olombelona. Misy ny olona milaza fa ny atody dia afaka manampy proteinina ihany koa, ary ny proteinina ao amin'ny atody dia avo kokoa, nahoana isika no tokony hisotro ronono? Izany dia satria ronono […]
Inona no mahatonga ny allergy amin'ny ronono?
"Feeling & Guardianship - Nestlé Anti-allergy Month Conference" dia natao tany Beijing. Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nanjary fanamby lehibe ho an'ny fianakavian-jaza ankehitriny ny aretin'ny ronono sy ny fisorohana ny zaza. Tamin'ny 8 Jolay, rehefa tonga ny Andro manerantany ho an'ny aretina manerantany, amin'ny maha-orinasa mpamokatra rononon-jaza izay namboly fatratra teo amin'ny sehatry ny raikipohy fanoherana ny alergika, ny Nestlé Maternal sy ny Infant School […]
Mety ve ny alika misotro ronono-osy?
Fa maninona ny alika no afaka misotro ronono osy fa tsy ronono mandritra ny fotoana lava? Ahoana no anampian'ny alika misotro ronono osy mba hitomboan'ny alika? Ny alika no bibidia voalohany novelomin'ny olombelona. Amin'izao fotoana izao, ny biby fiompy dia lasa fironana, ny biby fiompy malaza indrindra dia ny alika sy saka. Tena malaza ny alika. Na birao ianao […]
Inona no mahasamihafa ny ronono biolojika sy ny ronono mahazatra?
Miaraka amin'ny fiheverana amerikana ny "biolojika" miditra tsikelikely amin'ny fiainantsika dia niova be ny fomba fiainam-bahoaka sy ny sakafo. Indrindra rehefa manome sakafo ny zazakely sy ny ankizy kely dia malaza kokoa ny vovo-dronono vita amin'ny ronono. Ny ray aman-dreny misafidy vovo-dronono voajanahary ho an'ny zazakely dia hahita loharanon-dronono voajanahary mahavelona sy madio kokoa. Mba hahafahanao hahafantatra tsara kokoa ny loharano misy ronono biolojika, […]
Inona no tena ilaina amin'ny ronono?
Ny vovo-dronono dia vovo vita amin'ny fanesorana rano amin'ny ronono ka mety amin'ny fitehirizana azy. Ny vovo-dronono dia amboarina amin'ny ronono vaovao avy amin'ny fambolena na ronono osy amin'ny alàlan'ny fanala na fanamainana, esorina ny ankamaroan'ny hamando amin'ny ronono, ary asiana vitamina sy mineraly sahaza aorian'ny fanamainana. Ny rononon-dreny no sakafo tsara indrindra […]
Iza amin'ireo karazana ronono no tsara indrindra?
Isan'ny olona tsy mahazaka laktose Miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny olona sy ny fitomboan'ny fifantohana amin'ny fahasalamana, nanjary "kintan'ny entam-barotra" malaza ny fanampin-tsakafo, izay misy fiatraikany samy hafa amin'ny fahasalaman'olombelona, ​​fa ny vokany dia somary mpitovo ihany, ary karazana sakafo ny famenony dia afaka mamokatra vokatra mifanentana amin'ny vatan'olombelona. Eo ambanin'ny […]
Mety misy fiatraikany amin'ny ronono ve ny fiolanan'ny ombivavy be ronono?
Amin'izao fotoana izao, amin'ny dingan'ny fiompiana omby aman'ondry sy ny famokarana dia matetika no misy ny fivontosana ravina hoof, ary amin'ny omby dia betsaka no miely ny omby sy ny ombivavy ambany ambany ny ankamaroany, ny ankabeazan'izy ireo dia an-tsokosoko, saingy misy fipoahana tampoka indraindray. mitranga any amin'ny toeram-pitsaboana. Ao anatin'ny fizotran'ny sakafo ara-pahasalamana […]
Aogositra 9, 2019
Fa maninona ianao no misafidy ronono?
Misy karazany maro ny biby izay mamokatra ronono eto amin'izao tontolo izao. Raha ny tena marina, ny biby mampinono rehetra dia afaka mamokatra ronono, ary misy biby mampinono mihoatra ny 6000, azo lazaina fa manana safidy maro ny olombelona. Na izany aza, eo amin'ny tsenantsika dia ny ronono foana no vokatra be ronono mahazatra indrindra. Ankoatr'izay, maro […]
Tena tsara noho ny ronono ve ny ronono buffalo?
Vao tsy ela akory izay, ny fanaovana doka ronono buffalo dia hatraiza hatraiza. Ny ronono buffalo dia aseho ho "ronono tonga lafatra akaiky indrindra eto an-tany", izay fanomezana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Ny fampahalalana ny ronono ombidia amin'ny dokambarotra dia toy izao: 1. Ny sandan'ny sakafo dia avo maro heny noho ny ronono; […]
1 2 3 manaraka »